Rocade Andohatapenaka : Novolen’ny MTM « casseur de vitesse » -
AccueilSongandinaRocade Andohatapenaka : Novolen’ny MTM « casseur de vitesse »
Mampivarahontsana. Nitrangana lozam-piarakodia indray tetsy amin’ny lalam-baovao « Rocade » Andohatapenaka, ny alin’ny alatsinainy nifoha talata teo. Potika tsy nisy noraisina ilay fiara 4×4 , ary namoizana ain’olona telo mihitsy.
Manoloana izany indrindra, nidina ifotony nijery ny mahakasika ny tokony hitrangan’ny loza matetika amin’iny Rocade iny ny minisitry ny Fitaterana (MTM), Beboarimisa Ralava, omaly. Tamin’izany indrindra no nanambarany fa tsy maintsy mandray fepetra ny minisiteran’ny Fitaterana mba hisorohana ny loza toa ireo efa nitranga tamin’iny lalana iny.
Araka izany, nohamafisina ny kisary famantarana manambara fampitandremana amin’ny lalana. Teo ihany koa ny fametrahana ireo kisary famantarana amin’ny sisin-dalana, na “panneaux de signalisations”. Tsy vitan’izay fa nohamafisina tamin’ny fametrahana ny fanenana ny hafainganam-pandehan’ireo fiara, na ny “casseur de vitesse” izany.
Raha ny fanazavan’ny teknisianina, any amin’ny 200 m tsy hidirana amin’ilay fiolahana boribory , na “rond point” izay mamarana ny Rocade hihazo an’iny Digue iny dia efa misy kisary famantarana voalohany napetraka. Ny faharoa kosa eo amin’ny 150 m. Izany no natao mba hampihenana avy hatrany ny hafainganam-pandehan’ireo fiara amin’iny lala-mahitsy be iny.
Nambaran’ny minisitry ny Fitaterana, Beboarimisa Ralava, fa tsy maintsy noraisina avy hatrany ny fepetra manoloana ireo loza nifanesy. “Lalana vaovao izy ity, ary efa ela no nandraisana fepetra tamin’ny fametrahana ireo singam-pamantarana isan-karazany saingy, tsy nahasakana ny loza anefa izany noho ny fananan’ireo olona fiara matanjaka. Teo ihany koa anefa ny tsy fitandreman’ireo mpampiasa lalana ka mahatonga ny loza. Tsy maintsy nandray ny andraikiny ny minisitera nanamafy ireo kisary famantarana miloko fotsy amin’ny lalana mba ahafahana mampitandrina ireo mpampiasa lalana” hoy ny minisitry ny MTM
Notsindrian’ny minisitra hatrany fa tokony hitandrina ny rehetra mpampiasa lalana satria na dia tsy tokony hametrahana “casseur de vitesse” ny lalam-baovao toa ny Rocade dia voatery tsy maintsy napetraka izany. “Manentana ny mpiara-belona hatrany ny minisitera mba tokony samy hitandrina satria lahitokana ny aina”, hoy ny minisitra Beboarimisa Ralava.